नेपाल आज | सर्वोच्चको आदेशविपरीत कान्ति अस्पतालमा अमेरिकी खोप परीक्षण
सर्वोच्चको आदेशविपरीत कान्ति अस्पतालमा अमेरिकी खोप परीक्षण
दुई वर्षदेखि भइरहेको परीक्षणबारे अस्पतालका निर्देशक र विभागीय प्रमुख नै अनभिज्ञ
कान्ति बाल अस्पतालमा उपचाररत बालबालिकामा सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत रोटा भाइरसविरुद्धको खोप परीक्षण भइररहेको छ ।
सरकारले नियमित खोपका रूपमा देशैभर एकैसाथ ल्याउन लागेको रोटा भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिनले साइड इफेक्ट गरिहाले तत्काल अप्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यस्तो अप्रेसन गर्ने सुविधा कान्ति अस्पतालबाहेक अन्यन्त्र छैन ।
निर्देशक डा. राइका अनुसार साना नानीहरूको अप्रेसन गर्न चिकित्सक आफैँ डराउँछन् र जोखिम लिन चाहँदैनन् । रोटा भाइरसविरुद्धको खोप दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकालाई लगाउँदा उनीहरूको उपचार गर्ने आवश्यक ठाउँसमेत छैन ।
भ्याक्सिन नियमित गर्न तयारी सुरु
परीक्षणमा रहेको उक्त भयाक्सिन नियमित खोपका रूपमा ल्याउन लागेको स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको बाल स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ  । ‘हामीले स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिन सुरु गरिसकेका छौँ, सकेसम्म २०१९ को सुरुबाट भ्याक्सिन लगाउन सुरु गर्छौं,’ महाशाखाका निर्देशक डा. विकास लामिछानेले भने ।
सो भ्याक्सिन इन्टरनेसनल भ्याक्सिन अलाइन्स ‘गाभी’को सहयोगमा नियमित खोपका रूपमा ल्याउन लागिएको र भ्याक्सिनको कुल मूल्यको २० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले पनि व्यहोर्ने लामिछानेले जानकारी दिए ।
नेपालमा आवश्यक नपर्ने औषधि पनि परीक्षण
निर्देशक लामिछानेका अनुसार नेपालमा ट्रायल भइरहेका धेरै औषधि नेपालीलाई तत्काल आवश्यक नपर्ने खालका छन् । तर, विदेशी संघसंस्थाले परीक्षणका लागि गरेको आग्रहलाई ‘हुन्न’ भन्न नसकेकै कारण यस्ता भ्याक्सिन परीक्षण भएका हुन् ।
उनले भने, ‘हामी नेपाली विदेशीले जे भने पनि नाइँ भन्न सक्दैनौँ, त्यसकै परिणाम हो औषधिको परीक्षण ।’ अधिकारीहरूका अनुसार कमजोर मुलुक भएको फाइदा पनि विदेशी संघसंस्थाले विभिन्न कारणले उठाउँदै आएका छन् ।
परीक्षणबारे अस्पताल निर्देशक र विभागीय प्रमुख नै अनभिज्ञ
पूर्वनिर्देशक रायमाझीलाई सोध्नू
निर्देशक, कान्ति अस्पताल
कान्तिमा रोटो भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन ‘ट्रायल’ भइरहे पनि विस्तृतमा थाहा छैन । पूर्वनिर्देशक डा. अजित रायमाझीको पालामा सुरु भएको हो । मलाई त कसैले यसबारे औपचारिक जानकारी पनि दिएको छैन, हल्ला सुनेको मात्रै हो । कति बालबालिकामा परीक्षण गरे, कस्तो परिणाम आयो भन्नेबारे रायमाझीसँगै बुझ्नू ।
कम्तीमा निर्देशकलाई त थाहा दिनुपर्ने हो
डा. कैलाश शाह
प्रमुख, अनुसन्धान विभाग, कान्ति अस्पताल
अनुसन्धान विभाग प्रमुख भए पनि मलाई भ्याक्सिन ट्रायलबारे कसैले जानकारी गराएको छैन । कम्तीमा निर्देशकलाई त थाहा दिनुपर्ने हो । उहाँलाई पनि थाहा दिइएको रहेनछ ।
मलाई पनि थाहा छैन, बुझेर पछि भनौँला
पूर्वदिर्नेशक, कान्ति अस्पताल
भ्याक्सिन ट्रायल भइरहेको हो । तर, कति बालबालिकामा भएको छ, मलाई पनि यकिन भएन । मैले परीक्षण गर्ने संस्थासँग जानकारी मागेको छु, जवाफ आएको छैन । जवाफ आएपछि जानकारी गराउँला ।
सर्वोच्च अदालतले परीक्षण नगरिएका खोप तथा औषधि प्रयोग नगर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गत बिहीबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारलाई नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर हुनुका साथै संवेदनशील विषयमा प्रमाणित भएका र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा भएका औषधि मात्रै प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
६ वर्षअघि डोटीमा दादुराविरुद्धको खोप लगाउने क्रममा चारजना बालबालिकाको ज्यान गएपछि औषधिको परीक्षण र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मृतक बालबालिकाका परिवारलाई जनही १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तीन महिनाभित्र दिलाउन परमादेश जारी गरेको छ ।
खोपहरूको परीक्षणविना नै प्रयोग गरिँदा विभिन्न स्थानमा बालबालिकाको ज्यान गएको भन्दै सर्वोच्चले नेपाल भित्रिएका खोप र औषधिको मापदण्ड सही र गुणस्तरीय भएको ग्यारेन्टी भएपछि मात्र वितरण र प्रयोगमा ल्याउन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको धेरै आदेश मान्दैन सरकार
सर्वोच्च अदालतका धेरै आदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । ढिलै भए पनि सर्वोच्चले जनताको पक्षमा आदेश गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पनि सरकारले नै हो । तर, यो आदेश पनि कार्यान्वयन गर्ला भनेर विश्वास गर्न सकिन्न । सरकार आफ्ना नागरिकप्रति जिम्मेवार नहुँदा नपाली जनतामाथि विदेशी औषधि कम्पनीले वर्षौंदेखि परीक्षण गर्दै आएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
सर्वोच्च अदालत खोप परीक्षण